गड्डाचौकी नाका बन्द र कञ्चनपुर ‘लकडाउन’गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? (अन्तर्वार्ता) – Everest Dainik – News from Nepal
गड्डाचौकी नाका बन्द र कञ्चनपुर ‘लकडाउन’गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? (अन्तर्वार्ता)
महेन्द्रनगरः कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुर आइतबार राति १२ देखि ‘लकडाउन’ हुँदैछ ।
भीमदत्त नगरपालिकाको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
सूचनामा ‘लकडाउन’भन्ने शब्द भने उल्लेख गरिएको छैन । तर, मध्यरातिदेखि नै लागू हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा उद्दार र राहतमा संलग्न यातायातबाहेक अरु सबै प्रकारका पसल, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानासमेत अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ भने आकश्मिक उपचारबाहेक अन्य कामका लागि घरबाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई भनिएको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा यसलाई ‘लकडाउन’को रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सर्बसाधारणमा त्रास उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले ‘लकडाउन’ भने शब्द प्रयोग गरेका हैनौं । कञ्चनपुरलाई ‘लकडाउन’ नै गरिएको हो । सूचनाको बर्खिलाप बिनाकारण घर बाहिर कोही निस्किएको पाइएमा कारबाही गर्छों ।’
कोरोनाका कारण विश्वका कतिपय देशले त्यहाँको अवस्था हेरेर निश्चत राज्य वा शहरलाई ‘लकडाउन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको थिए, त्यसलाई ‘सेमीलकडाउन’ को रुपमा हेरिएको छ । योसँगै जिल्ला नै ‘लकडाउन’ गर्नेमा कञ्चनपुर पहिलो जिल्ला बनेको छ ।
योसँगै गड्डाचौकी नाका पनि यही चैत्र ११ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नाका बन्द गर्नुपर्ने कञ्चनपुरलाई ‘लकडाउन’नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
प्रस्तुत छ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टसँग गरिएको कुराकानी :
गड्डाचौकी पश्चिमी सीमा नाका हो । कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएका भारतका राज्यमा समेत कोरोनाका बिरामी फेला परेका छन् । भारतमा संक्रमित र मृत्यु हुने संख्या बढ्दै छ ।
त्यसकारण कोरोनाबाट बञ्नका लागि भारतमा रहेका नेपाली र भारतीय मेत धमाधम नेपाल आउँदैछन् । एकदुई दिन यता मात्रै दैनिक १५ हजारभन्दा बढी यहीँ नाका (गड्डाचौकी)भएर नेपाल भित्रिए । सबै क्षेत्रबाट नाका बन्द गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो ।
अन्य नाका बन्द रहेको अवस्थामा गड्डाचौकी नाका व्यवस्थित गर्न सकेनौं भने स्थिति भयावह हुनसक्छ । कञ्चनपुर मात्रै हैन, देशनै उच्च जोखिममा हुन्छ ।
त्यसकारण हामीले गडडचौकी नाका बन्द गर्ने र कञ्चनपुरलाई ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेका हौं । नाका मात्रै बन्द गरियो भने भारतबाट लुकिछिपि आउने सम्भावना देखेर कञ्चनपुरलाई नै ‘लकडाउन’गर्ने निर्णय गरेका हौं । उपयुक्त समय नआएसम्म गड्डाचौकी नाका बन्द रहन्छ र कञ्चनपुर ‘लकडाउन’रहन्छ ।
ट्याग्स: कञ्चनपुर ‘लकडाउन’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भिमदत्त नगरपालिका, सुरेन्द्र विष्ट
कोरोना कहरः २४ घण्टामा कहाँ कतिको मृत्यु र संक्रमित ? (सूचीसहित)
चीनमा फेरि बल्झिँदै कोरोनाः देखिए ४२ संक्रमित, एकको मृत्यु
डेढ घण्टा टिक्न नसकेको निर्णय, ‘अप्रिल फुल’ गरेको भन्दै व्यंग्य !
अनलाइनमार्फत पठनपाठन शुरू गर्दै त्रिवि, स्थगित परीक्षा कहिले ?
भारतमा एकैदिन ४८ को मृत्यु, संक्रमित कति ? (सूचीसहित)
बैशाख ३ पछि पनि लकडाउन लम्बिने !
कोरोना संक्रमित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री आइतबारदेखि अस्पतालमै, के छ अवस्था ?
कोरोना कहरः साढे ९५ हजार बढीको मृत्यु, १६ लाख नाघे संक्रमित (सूचीसहित)